WARBIXIN: Salah, De Bruyne, Robben,Lukaku & Xiddigihii Uu Jose Mourinho Iska iibiyay Ee Wacadaraha Ka Dhigaya Kooxaha Kale – Kooxda.com
Home 2018 February Ingiriiska, Wararka Maanta, Warbixinada Ugu Xiisaha Badan, Warbixino WARBIXIN: Salah, De Bruyne, Robben,Lukaku & Xiddigihii Uu Jose Mourinho Iska iibiyay Ee Wacadaraha Ka Dhigaya Kooxaha Kale
WARBIXIN: Salah, De Bruyne, Robben,Lukaku & Xiddigihii Uu Jose Mourinho Iska iibiyay Ee Wacadaraha Ka Dhigaya Kooxaha Kale
February 7, 2018 · by	Abdi Weli Aadan · 0
Mohamed salah ayaan kaliya ahayn xiddiga uu jose Mourinho sida xun ugula dhaqmay chelsea sidoo kale iska fasaxay isaga oo aan wax fursad ah siin.
Xiddiga reer Egypt ayaan fursad badan ka heli tababare Special One kadib markii uu Blues kaga so biiray kooxda Basel.
Laakiin kadib markii uu noloshiisa ciyaareed ku soo noolceeyay Fiorentina Iyo Roma waxa uu ku soo laabtay premier league halkaas oo uu haatan wacdaro ka dhigayo.
Salah ayaa 28 gool dhaliyay 25 kulan oo uu ciyaaray xilli ciyaareedkiisii ugu horeeyay ee Anfield waxana uu xulka qarankiisa ku hogaamin doonaa ka qayb galka koobka adduunka.
Mourinho ayaa og sababaha uu salah ugu ogolaaday in uu ka tago kooxda chelsea isaga oo kaliya ciyaaray 19 kulan 18 bilood oo uu kooxda joogay.
Laakiin Salah ayaan ahayn xiddiga kaliya ee uu Jose Mourinho iska fasaxay kadib kooxo kale isku muujiyay waxana aan warbixintan ku soo bandhigi doonaa xiddigaha uu iska fasaxay ee markii dambe wacadaraha dhigay.
Robert Huth: waxa uu 6 milyan oo kaliya uga iibiyay kooxda Middlesbrough sanaskii 2006 kadib markii uu fursad ka waayay laakiin xiddiga ayaa fure ka ahaa kooxdii Leicester city ee ku guulaystay horyaalka premier league sanadka 2015.
William Gallas: Waxa uu ka iibiyay Arsenal sanadkii 2006 isaga oo ka qayb ahaa heshiis ay chelsea ku heshay Ashley Cole waxana uu Gallas Gunners ku qaatay 4 xilli ciyaareed oo cajiib ah isaga oo xitaa laga dhigay kabtanka kooxda.
Arjen Robben: Waxa uu Real Madrid kaga iibiyay 24 milyan oo euro sanadkii 2007 kadib 3 sano oo uu joogay chelsea una saftay 105 kulan khabiirka reer Holland ayaa haatan laf dhabar ka ah Bayern Munich koobab badana kula guulaystay.
Glen Johnson: Waxa uu kaliya 4 milyan uga iibiyay kooxda Portsmouth sanadkii 2007 Chelsea ayaa isku dayday in ay xiddiga dib ula soo saxiixato kadib markii uu wacdaro dhigay laakiin xiddiga ayaa ka doortay Liverpool isaga oo 18 milyan ugu biiray.
Kevin De Bruyne: Waxa uu 18 milyan uga iibiyay kooxda Wolfsburg kadib markii uu kaliya 3 kulan oo horyaalka ah ku bilowday shaxda Mourinho, laakiin xiddigan ayaa qaab waali ah ku soo bandhigay Germany waxana uu ugu dambayn ku soo biiray City isaga oo haatan ah xiddiga ifinaya horyaalka premier leageu.
David Luiz: Waxa uu kooxda Paris St Germain uga iibiyay 50 milyan inkasta oo uu ahaa xiddig ay si weyn taageerayaashu u jeclaayeen waxana uu 2 sano kadib kooxda ugu soo laabtay 34 milyan oo euro isaga oo kooxda chelsea kula guulaystay horyaalka premier league xilli ciyaareedkii hore.
Romelu Lukaku: Waxa uu kala soo saxiixday kooxda Anderlecht sanadkii 2011 laakiin waxa uu kaliya Blues u ciyaaray 3 kulan waxana uu sanadkii 2014 28 milyan kaga iibiyay Everton, si kasta ha ahaatee Jose Mourinho ayaa kula midoobay Man United isaga oo xagaagii ka bixiyay lacag dhan 75 milyan oo euro waxana uu ilaa haatan United u dhaliyay 19 kulan 36 kulan oo tartamada oo dhan ah.
Mohamed Salah: Waxa uu Roma uga iibiyay lacag dhan 12 milyan oo euro sanadkii 2016 isaga oo horyaalka Italy wacdaro ka dhigaym waxana uu Liverpool ugu soo biiray Lacag dhan 37 milyan oo euro 11 bilood kadib waxa uu dhaliyay 28 gool waana xiddiga ay ugu jecel yihiin taageerayaashu.